Namoaka pasipaoro vaovao ahitana ireo malazan’ny tantara an-tsary ao aminy i Belzika · Global Voices teny Malagasy
Mampisongadina an'i Tintin, Natacha, Marsupilami, Smurfs, Lucky Luke, Spirou ary maro
Voadika ny 02 Febroary 2022 5:52 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Nederlands, عربي, English
Fitambarana sary fampiroboroboana avy amin'ny Minisiteran'ny Raharaham-Bahiny Fitondram-Panjakan'i Belzika. Fampiasana araka ny tokony ho izy
Ity tantara ity dia mifototra amin'ny fitantaram-baovao avy amin'ny Meta.mk. Navoaka eto indray ny endrika nasiam-panovana noho ny fifanarahana fizarana votoaty eo amin'ny Global Voices sy ny Metormorphosis Foundation.
Nampahafantatra ny pasipaoro Belza vaovao ny praiminisitra lefitra Belza sady minisitry ny raharaham-bahiny Sophie Wilmès tamin'ny 27 Janoary. Araka ny filazan'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny, azo antoka kokoa ny pasipaoro vaovao noho ny teknikam-piarovana vaovao sy ny fanamboarana manokana, raha mahatonga azy ho “manome voninahitra ny iray amin'ireo ravaky ny kolontsaina [Belza]: ny vehivavy maherifo sy ny lehilahy maherifo amin'ny sariitatra” ny famolavolana tany am-boalohany.
Namoaka horonantsary mampiseho ny taratasy tamin'ny alàlan'ny pasipaoro vaovao ihany koa ny ministera.
Ny tapany anoloana amin'ny pasipaoro no ahitana ny lahatahiry manokana manasongadina ireo seho avy amin'ny andian-tantaran'i Tintin “Dia mankany amin'ny volana,” ao anatin'izany ny balafomanga malaza, izay maodely natao ho famantarana ny Seranam-piaramanidin'i Bruxelles.
Manome voninahitra ny iray amin'ireo ravaky ny kolontsaintsika ny pasipaoro Belza vaovao: ireo maherifo amin'ny tantara an-tsary izay manana ny lohahevitra voalohany ny fandehanana lavitra. Tsy maintsy aseho ny asan'i Hergé, avy eo i Tintin no hiaraka aminao amin'ny dianao manaraka!
Ny pejy anatiny amin'ny pasipaoro dia mampiseho sary mirindra avy amin'ny tantara an-tsary belza isan-karazany, ary, miaraka amin'i Tintin sy Kapiteny Haddock, ianao afaka mahafantatra an'i Natacha mpikarakara ao amin'ny fiaramanidina, Marsupilami, Billy & Buddy (Boule et Bill), Blake & Mortimer, ny Smurfs, Lucky Luke sy ry Daltons, ary Spirou & Fantasio.
Nambaran‘ny ministera fa ny pasipaoro vaovao dia natao tanaty fiaraha-miasa miavaka tamin'ireo trano famoaham-boky sy ireo mitazona ny zo mifandraika amin'izany, izay nanaiky hampiasana ireo malaza amin'ny tantara an-tsary ho fandravahana ilay antontan-taratasy.
Amin'ny fotoana namoahana ny pasipaoro vaovao dia hisy fampirantiana vonjimaika momba ny tantaran'ny pasipaoro Belza azo idirana ao amin'ny Comic Art Museum manomboka ny 28 Janoary ka hatramin'ny 6 Marsa 2022.
Tao anatin'ny fanambarana ofisialy nataony, nanoritra ny praiminisitra lefitra sady minisitry ny raharaham-bahiny Sophie Wilmès:
“Iray amin'ireo tsara indrindra eran-tany ny pasipaoro Belza, reharehantsika izany, nefa mampitsiriritra ireo mpanao hosoka. Izany no mahatonga anay hiezaka hatrany hanatsara ny fiarovana azy. Ny fampidirana ity pasipaoro vaovao ity ihany koa no fotoana ahafahantsika manasongadina ny kanto faha-9, ny tantara an-tsary, izay singa fototra amin'ny kolontsaintsika sy ny tarapahazavana entiny any ivelany. Tiako ny hisaotra ireo trano famoahana, mpanoratra sy tompon'ny zo nanaiky handray anjara amin'ny tetikasa. Farany, teboka iray tena manan-danja amiko: nohamafisina ny kalitao sy ny fiarovana ny pasipaoro, saingy tsy hiakatra ny vidiny alain'ny Raharaham-bahiny. Ao anatin'ny tontolon'ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny, fihetsika mahery vaika izay hahasoa ny olom-pirenentsika izany. “
Ampandoavin'ny ministera EUR 65 ny olon-dehibe ary EUR 35 ny tsy ampy taona, miampy izay mety ho hetran'ny kaominina. Ny pasipaoro dia manan-kery mandritra ny 7 taona ho an'ny olon-dehibe ary 5 taona ho an'ny zaza tsy ampy taona. Afaka mahazo izany ao anatin'ny 5 andro fiasana amin'ny alàlan'ny fomba fanao mahazatra, na ao anatin'ny iray andro na latsaka amin'ny alàlan'ny fomba fiasa maika na super maika, amin'ny vidiny mihoatra.
Miabo tanteraka ny valintenin'ny olom-pirenena belza sy ny mpankafy tantara an-tsary iraisam-pirenena.
Ny pasipaoronao: olona maty sasany, voromahery, tendrombohitra
Ny pasipaoro Belza vaovao: Lucky Luke, Smurfs, Tintin
Naneho hevitra tao amin'ny Twitter ny mpandinika ara-politika frantsay fa “tena mahafinaritra tokoa ny pasipaoro Belza vaovao”, raha nanondro azy ho “mahatalanjona!”
Naneho ny heviny tamin'ny fomba belza tsy mieboebo sy diplaomaty ilay diplaomaty Belza Michael Cerulus.
Let’s say it reflects a shift from a somewhat exclusive and formal character of international travel to a more relaxed and open-minded experience. 😉
Andao atao hoe taratry ny fiovan'ny toetran'ny dia iraisam-pirenena somary ofisialy sy ananana manokana mankany amin'ny zavatra iainana milamina sy mampisoka-tsaina kokoa izy ity. 😉